ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဖေဖေါ်ဝါရီလ
အဆိုပါ Motion, ရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (R) ၏အသငျး (SMPTE (R)) - ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2015 - ထိပ်သီးအစည်းအဝေးလက်ရှိ & Emerging Technologies ကများနှင့်ဇာတ်လမ်းတွေကို White Plains, နယူးယော့၏အနုပညာနှင့်သိပ္ပံအပေါ်သူတို့ရဲ့သက်ရောက်မှုဆွေးနွေးမှစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကျွမ်းကျင်သူများကကိုဆွဲသား ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့သော 2015 NAB ပြရန်ရဲ့ကြေငြာခဲ့သည် ...
livedesignonline.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ: မျက်မှောက် & အသံရုံကမ္ဘာ့အများဆုံးထူးခြားအောင်မြင်သောကျမ်းစာ-based ပြဇာတ်ရုံကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းမကြာခဏ ... ရင်းမြစ်ကြောင်းခရစ်ယာန်ပုံပြင်များသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ immersive ဇာတ်စင်ညျဘဏ်ဍာတစ်ခုဖြစ်ပွားနေသောစီးရီးနဲ့အတူ "ဘဝဖို့ကမျြးစာရှိမယ်" ကိုအပျနှံခဲ့ Scoop.it - ​​အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း, Daily သတင်းစာ Edition ကို Beat
# OTT ဖို့ ... နဲ့ကျော်လွန်! အဆိုပါအကြောင်းအရာများပေးပို့၏အနာဂတ်, အတွေ့အကြုံနှင့်ဧပြီလ t.co/FVCntlfkcW ရင်းမြစ်ထဲမှာ #NABShow မှာ featured ခံရဖို့ငွေရှာခြင်းအတွက်: www.nabshow.com Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
Panasonic ကအဆိုပါ 2015 NAB ပြပွဲ (ဧပြီ 11-16th) မှာအသစ်တခု Micro Four Thirds စပ်ဓါတ်ပုံ / ဗီဒီယိုကင်မရာမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ရင်းမြစ်: www.hristotodorov.com Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
NAB Show ကို over-the-ထိပ်တန်းအကြောင်းအရာ Delivery ရင်းမြစ်အပေါ်အာရုံစိုက်: www.tmcnet.com Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
Viaccess-Orcas ရဲ့တီဗီနေရာတိုင်းမှာ Capgemini Technologies ကအတူပေါင်းလိုက်သောဖြေရှင်းနည်း, 23 သန်းပြင်သစ်စာရင်းပေးသွင်းထားသူများပဲရစ်မှညျ့ဝ Multiscreen အတွေ့အကြုံပေးဖို့လိမ္မော်ရောင် Enable - ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, Viaccess-Orcas, အကြောင်းအရာန်ဆောင်မှုများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်တိုးမြှင့်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင် - ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2015 ယနေ့လိမ္မော်ရောင်, တစ်ဦးဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာကုမ္ပဏီရဲ့ Voyages အသုံးပြု. ပြင်သစ်တွင်တစ်ဦး OTT multiscreen ဝန်ဆောင်မှုစတင်ခဲ့ပြီ - ...